Dagaalka Muqdisho oo ay ka Qaybqaadanayaan Ciidamo Itobiyan ah – Rasaasa News
Dagaalka Muqdisho oo ay ka Qaybqaadanayaan Ciidamo Itobiyan ah
May 22, 2009 Ogaden
Saaka Sallaad bidheeda ayaa si lama filaana waxaa uu dagaal uga qarxay magaalada Muqdisho. Dagaalka ayaa waxaa qaaday ciidamada dawlada oo aad u hubaysan, waxayna ka qabsadeen ciidamada Islaamiyiinta meelo ay fadhiyeen.
Sida ay sheegayaan wararka ka imanaya muqdisho waxaa qaybtii dambe ee dagaalka soo xoogaystay ciidanka wadaniyiinta Islaamiyiinta Somaliyeed oo dib u qabsaday meelihii laga qabsaday, waxaa kale oo ay ka qabsadeen ciidamada dawlada meelo muhiim ah.
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa ka soo dagayey garoonka Muqdisho dayaarado hub sida oo ka soo kicitimayey Addis Ababa iyo waliba ciidamo Itobiyan ah. Ciidamadan Itobiyanka ah oo qaarkood gashan yihiin dirayska ciidanka Somalida iyo dhar caadi ah, ayaa waxay dadku moodayeen in ay yihiin ciidamo beeleed markii saddex maalmood ka hore hub loogu qaybiyey g
Arintan ayaa waxaa xaqiijiyey ciidamada Wadaniyiinta Islamiyiinta oo qabtay qaar ka mid ah ciidamadaas iyo maydadkooda.
Masuuliyiinta dawlada ayaa maalmahan oo dhan waxaa ay ku baanayeen in ay qaadi doonaan weeraro ay kaga sifaynayaan Islaamiyiinta Muqdisho, hadalkaas oo ay aad dadweynuhu ula yaabeen meesha uu ka imanayo xooga is hortaagi kara ciidamada Islaamiyiinta. Ciidamada Islaamiyiintu waxay xoog kaga saareen ciidamada Itobiya koonfurta Somaliya, hadaba sidee ayey dawlada taagta darani u odhan kartaa xoog ayaanu adeegsan.
Waxaan la qarin karin diyaaradaha sida tooska ah uga soo kacaya Addis Ababa in ay keenayaan ciidan iyo hub la doonayo in lagu jabiyo wadaniyiinta Islaamiyiinta ah.
Dalka Ceylon oo aad Moodo in uu Soo Af Jaray Colaaddo 30 jirsaday
Home Secretary was warned of MI5’s ‘blackmailing of Muslims’